BKO tababare tababarka Antwerp ilmahaaga shaqada waxbarasho waqti-dhiman carruurta leh ilmaha
Waad nala soo xariiri kartaa
Waxaad baran si ay u dhiirigeliyaan carruurta in ay madax-bannaanida iyo horumarinta by abaabulka howlaha iyo hagaya kulanka. Waxaad baran waxa ilmaha waa marka iyo sida aad u dhisi karto trust waalidiinta iyo asxaabta. Waxaad baran in carruurta la siiyo qaab-dhismeedka iyo si habboon uga jawaabaan iyaga.
Waxaad baraneysaa sida loo beddelo cunug, la siiyo qubeys, ciddiyo gooyo, laakiin sidoo kale sida loo maareynayo nolosha nafaha. Waxaad diyaarin doontaa cunnooyinka cunnooyinka ilmaha iyo cunnooyinka iyo raashinka.
Waxaad jeceshahay in aad la shaqeeyaan caruurta
horjoogaha tababarka A ee Carruurta qaadataa celcelis ahaan laba sano.
Waa waxbarasho qumman, taas oo macnaheedu yahay inaad geli karto wakhti kasta oo sanadka ah laakiin waxaad ka qalinjabin kartaa oo keliya 30 June.
Waxaad haysataa shahaadada Kaaliyaha Saadka helitaanka waxbarashada waqti-dhiman ama aad si guul leh u dhammeysey ugu yaraan hal 4e Nafaqada & Daryeelka Sare ee waxbarasho waqti-buuxa ah.
Haddii aad soo raacday tababar oo ku yaal waxbarashada dadka waaweyn ama daryeel sare 6e ayaa guul u soo dhammaystay tababar u gaabshay haddii ay suuragal tahay. Waxaad u baahan tahay in ay bilowga 18 sano noqon 18 ee sannad dugsiyeedkaas.
Waxaad mas'uul ka noqon doontaa daryeelka iyo kormeerka carruurta maalin walba. Waxaad siisaa qaab-dhismeed iyo bilaabaan la-tashiga waalidiinta.
Waxaad tegi kartaa xanaanada, daryeelka ilmaha ama dugsiga barbaarinta. waxaa loo isticmaali karaa in aad ka shaqayso. Iyada oo shahaado maamulka ganacsiga laftiisa ayaa sidoo kale bilaabi kartaa ilmaha carruurta leh 18 ugu badnaan.
Muxuu kormeeraha xannaanada carruurta ku haboon yahay?
Waxaad sii wadan kartaa barashada haddii aad ka qalinjabisay waxbarashada dugsiga sare. Barnaamijka "Childhood Pedagogy" wuxuu ku siinayaa fursad aad ku noqotid bixiye xanaano caruureed oo ka badan carruurta 18. Waxaad sidoo kale baran kartaa waxbarashada macalimiinta xanaanada caruurta.
La taliyaha shaqada